Fourth Generation Santa Fe ရဲ့ပုံရိပ်ကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Hyundai Motor! – AutoMyanmar
Fourth Generation Santa Fe ရဲ့ပုံရိပ်ကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Hyundai Motor!
Hyundai အနေနဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ့် Fourth Generation Santa Fe ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Santa Fe ဟာ SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး First generation ကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ Second generation ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Third generation ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Generation တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခု အပြောင်းအလဲတွေမှာ ကွာဟသွားတဲ့ခုနှစ်တွေမှာတော့ System အပိုင်းမြှင့်တင်ထားတဲ့ model အသစ်တွေထွက်ရှိခဲ့တာပါ။
Hyundai Motor has unveiled its first facts about the New Generation Santa Fe, which will celebrate its world premiere in February before making its debut at the Geneva Motor Show in early March.
နောက်ဆုံး model ဖြစ်တဲ့ Fourth Generation Santa Fe ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလမှ ချပြပြီး မတ်လမှာဖြန့်ချီတော့မှာပါ။ မတ်လအစောပိုင်းမှာကျင်းပမယ့် Geneva Motor Show မှာဖြန့်ချီတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Generation အသစ်မှာ နောက်ဆုံးပေါ် လုံခြုံမှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ Smart Sense technology umbrella ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးသည်တွေရဲ့ထိုင်ခုံမှာ အာရုံခံစနစ်တွေထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအာရုံခံစနစ်တွေကတော့ ခရီးသည်ကားပေါ်ကဆင်းသွားတာနဲ့ မောင်းသူဆီကို သတင်းပို့ပေးမှာပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ မီးနီဖြတ်တာပါ။ ရှေ့ပြေး Model Santa Fe မှာတော့ မီးနီဖြတ်ရင် သတိပေးတဲ့အဆင့်ပဲပါဝင်ခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်မယ့် Fourth generation မှာတော့ သတိပေးတဲ့အဆင့်ကနေ သူ့အလိုအလို ဘက်ရိတ်နှင်းပေးတဲ့အဆင့်အထိတိုးမြှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားကိုအလိုလို ဘရိတ်နှင်းပေးတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲ့တာကတော့ ကားနောက်ပြန်မောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ကားနောက်ပြန်မောင်းတဲ့အချိန် မြင်ကွင်းအရမ်းကျဉ်းနေတယ်ဆိုရင် မောင်းသူကိုသတိပေးပြီး အလိုအလျှောက်ဘရိတ်နှင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင် Hyundai ဟာ Santa Fe ရဲ့ Fourth generation မှာလုံခြုံမှုအပိုင်းကိုတော်တော်အားစိုက်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Hyundai ကတရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့ Fourth generation Santa Fa ရဲ့ ပုံဟာ တစ်ပုံသာရှိပါတယ်။ ပုံလေးကအနည်းငယ်မှောင်နေတာကြောင့် ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုသေချာတွေ့မြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ နဲ့ မတ်လအတွင်းမှာမှ သေသေချာချာမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဒီကြားထဲတရားဝင် Teaser image လေးတွေထပ်မံထွက်ရှိရင်လည်း Automyanmar ကဖော်ပြဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
Hyundai Motor Releases First Teaser Image of the Fourth Generation Santa Fe https://t.co/8xVH5uNCVM pic.twitter.com/Fyri01hCJe
— Route 46 Hyundai (@Route46Hyundai) January 25, 2018
Hyundai, New Technology